A review of P T Mtuzes book, Umdlanga (1976)
by Fikiswa Ngqase
Kule ncwadi isihloko sayo sithi Umdlanga ngokubhalwe nguP T Mtuze sifumana umlinganiswa onguLanga ongumntwana weli xesha. Ingxaki yakhe walukele esibhedlele, nto ke leyo engahambisaniyo nomthetho kayise.
UFikele, uyise, njengomntu osatshila ngezasendulo, akayiboni into yokuba uLanga angayi esuthwini. Kule ncwadi uNomthunzi unkosikazi kaFikele uyisimboli yokhanyo, nempucuko kuba uyazibona iinguqulelo ezintsha entlalweni yaye akazichasanga. Naye ifuthe lakhe liyabonakala kusapho lwakhe uyaluqonda noxanduva oluthwelwe lulutsha lwanamhlanje. UNomthunzi uyafikeleleka ebantwaneni bakhe, yiyo loo nto kuba lula kuLanga ukuba ayiphalaze kunina ingxaki yakhe kunakuyise.
UFikele akahambisani nokuba umcimbi omkhulu kangaka ofuna ubudoda uphalazwe ebafazini kuba uphila kumaxesha akudala. Kwaye akayamkeli into yokuba athi eyindoda umcimbi ofuna ubudoda awuxelelwe ngumfazi. Uthi:
Ininzi gqitha into oyaziyo, ndiyakubona. Uze ulumke ungachatshazelwa ligazi. Xa lo mcimbi seniwuqhube wagabadela nisandifakela ni mva? (p 3)
Le nto ibonisa ukuba uFikele apha emzini wakhe uphala emva akazixelelwa izinto ezibalulekileyo, izinto ziqala kwinkosikazi yakhe.
Xa sihlalutya umlinganiswa onguCikizwa umbhali ubaveze noLanga uthando lwabo luvutha kwaye selukwinqanaba eliphezulu. ULanga sele eyithe tshuphe kunina into yokuba kukho intombi ayibonileyo, intombi yaseSada. UCikizwa uzotywe wayintombi entle kakhulu ethanda ezolonwabo, ngenxa yoko akazange aliphumelele ibanga leshumi. Uthe akuva ukuba uLanga yinkwenkwe wabhebhetha akafuna nokumbona. Wasuka wazibandakanya neentshaba zikaLanga, nazo zatsho zafumana ikroba lokumtyabeka ngento angeyiyo. Uthe akwahlukana noLanga zange aphinde afumane luthando lusulungekileyo olufana nolu ebelunikwa nguLanga. ULanga yena wafumana umfazi uNontando intombi evuthiweyo kunoCikizwa. Akakhange atyhafe yindlela uLanga aluke ngayo. Xa sijonga uNobantu sifumana intombi echubekileyo nengakwaziyo ukuvala umlomo xa kusonakala. Ukwazile ukudibanisa iintshaba zikaLanga, uCikizwa, uPhumi kunye noNzame, uye wabanqwanqwada kwizenzo zabo ezimbi. Uyamvusa uCikizwa kuba wayibona into yokuba uNzame noPhumi baseyelenqeni lokuchitha uthando lukaLanga noCikizwa.
UNobantu uyayamkela indlela yolwaluko azikhethele yona uLanga kuba uNobantu uyazamkela iinguqu zala maxesha. UNobantu uyakwazi ukuvakalisa uluvo lwakhe. Sifumana ungquzulwano phakathi kukaLanga noyise okolelwa mpela ukuba inye indlela eya ebudodeni kukwalukela ebhumeni.
Apho kukho iinguqulelo eluntwini kunyanzelekile ukuba kubekho ungquzulwano lwezimvo malunga nalo mbandela. Le nguqulelo kuxoxwa ngayo kule ncwadi ibonakala kakhulu kule mihla nangona ibhalwe ngo1972 kuba kukho ingxaki enkulu yokusweleka kwabakhwetha esuthwini. Yiyo loo nto abalinganiswa abafana noLanga bacinge ngezinye iindlela zokwenza eli siko.
Umxholo kulo mdlalo
Umxholo wale ncwadi ungobudoda kwaXhosa. Ukuphuhlisa kwakhe lo mxholo wenze ungquzulwano phakathi kwabantu abasadla ngendeb endala kunye nabantu abaphila kula maxesha empucuko yaseNtshona. Uzamile umbhali ukubonakalisa ngabalinganiswa ukuba awukho umahluko phakathi komntu owalukele esibhedlele kunye nomntu owalukele ehlathini. Ubudoda bomntu abuxhomekekanga ukuba abe walukele phi, into ethethayo zizenzo zakhe kuphela. Ngaphezulu ulutsha kula maxesha siphila kuwo alusenalo ixesha lokuya hlathini ukuze umntu abe yindoda, ukutsho eli siko ngokuhamba kwamaxesha liza kuhamba liphelelwe. Abanye abantu ekucacileyo ukuba bayangcungcutheka bubukhwenkwe bukaLanga nguNzame noPhumi. Bahamba baya kwinkonde uMpinda. Kwintetho yakhe uMpinda wabaxelela ukuba ubudoda asiyonto yokuba ube ubumbonile ubani esaluka phi xa bekutheni, okanye ahambe echaza ukuba uyindoda koko yimisebenzi yakhe emchazayo. Ude athi:
Indoda kwaXhosa ayibhalwanga magxeni okanye ebunzi ukuba yindoda, koko ibonwa ngezenzo, isimo ke ukutsho. (p 47)
Omnye umntu obe negalelo ekuphuhliseni iinjongo zombhali nguNobantu. Uthi ngenye imini xa wayecebisa uCikizwa olahla uLanga kuba esiva iindaba zokuba uyinkwenkwe:
Nobantu: Xa athi walukile ukhathazwa yintoni ke wena kuloo nto? Akuyongcibi yaye akunguye nomlolongi-masiko amaXhosa. Wena wamkela le nto uyixelelwayo ngumfana womXhosa qha ke. (p 15)
Ngentetho kabaw uMpinda kwitheko ebelikho umbhali uyayiphuhlisa injongo yencwadi yakhe. Uthi amaxesha ngamanye ngoku, masizame siluluntu ukuhamba nokutshintsha kwezinto. Makangajongelwa phantsi umntu owalukele esibhedlele, naye yindoda njengalo uye ebhumeni ngakumbi xa izenzo zakhe zingqina kuba zizo eziziimpawu zobona budoda, hayi ukuba walukele phi. Ucaphula athi:
Nize niwuphathe ngobunono, xa ungasebenzi uhlale kwikhohlombe lawo ukuze ungabi namhlwa. Mbangi yokuba ungabi yiyo laa ntsimbi niyiqhelileyo yamandulo kukuguquka kwamaxesha nomthetho osalelalyo ukuba sibe neizixhobo ezingenabungozi. Kungoku nje neembongi zethu seziphatha oosingamikhonto bomthi!! Zijikile izinto bantwana benkos entle. Amaxesha ngamanye, unokuba uyangqina noNgxabane apho akhoyo.